Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tonizia » Fiaran-dalamby mifandona any Tonizia Miala amin'ny naratra 30 na mihoatra
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Fitsangatsanganana an-dalamby • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Tonizia
Fiaran-dalamby roa no nifandona tany Tonizia androany alakamisy 7 oktobra 2021 ka olona 30 no naratra. Nentina tany amin'ny hopitaly 2 akaiky ireo naratra.
Tany ivelan'ny tanànan'i Tunis, renivohitr'i Tonizia, tao amin'ny faritr'i Megrine Riadh, Ben Arous, no nitrangan'ny fifandonana.
Nisy fifandonana fiaran-dalamby marobe tato ho ato tany Tonizia ka namoizana ain'olona sy naratra.
Ny ratsy indrindra dia tamin'ny 2015 raha olona 19 no maty ary manakaiky ny 100 naratra taorian'ny fiaran-dalamby nifatratra tamin'ny kamio.
Tany amin'ny faritra Megrine Riadh any Ben Arous no nitrangan'ny fianjerana, teo ivelan'ny renivohitr'i Tunis ihany. Betsaka ny fantsom-piaran-dalamby tao amin'ny firenena nandritra ny taona maro.
Ny 28 desambra 2016 dia nisy ny fifanenjehana teo amin'ny lamasinina sy ny bus iray niasan'ny Governemanta Nabeul Orinasam-pitaterana isam-paritra. Ny fifandonana dia nitranga tao amin'ny National Road 1 tao Sidi Fathallah, tanàna iray any Djebel Jelloud akaikin'ny renivohitr'i Tunis. Olona 5 no maty ary manodidina ny 52 ny olona naratra tamin'io fianjerana io. Amin'ireo izay maty dia misy manamboninahitra miaramila tonizianina 2, mpiasan'ny Brigade anti-terrorism, ary vehivavy sy zazakely.
Fianjerana fiarandalamby 2015
Taorian'ny fanadihadiana nataon'ny Minisiteran'ny Fitaterana any Tonizia, ny antony mivantana voatonona tamin'io fifandonana 2016 io dia ny hafainganan'ny mpamily fiara be loatra ary ny tsy firaharahiany ny fanairana am-peo navoakan'ny lamasinina. Tsy mivantana, ny fanemorana ny fanamboarana ny lesoka amin'ny lalamby sy ny sakana mandeha ho azy ary koa ny tsy fahampian'ny fiaraha-miasa amin'ireo manampahefana momba ny filàna famantarana tsy maharitra sy ny tsy fisian'ny lehilahy iray mpamonjy voina eo amin'ny fihaonan-dàlana dia voalaza ho antony nahatonga ny fianjerana ihany koa.
Ny fifandonana farany nahafaty indrindra dia tamin'ny volana Jona 2015 raha 19 no maty ary 98 no naratra. Teo anelanelan'ny lamasinina sy ny kamio tao El Fahs no nitrangan'ny fifandonana Tonizia. Ny antony lehibe nahatonga izany lozabe izany dia ny tsy fisian'ny sakana amin'ny fiampitana ambaratonga.
Tamin'ny 24 septambra 2010 dia nisy fiara fiaran-dalamby Bir el-Bey iray nifandona tamina lamasinina iray hafa avy any Sfax an'i Tonizia ka nahatonga azy io tsy ho afa-mihetsika intsony ary nianjera rehefa voadonan'ny fiaran-dalamby hafa teo amin'ny kalesin'ny rambony teo amin'ny gara. Niteraka fahafatesan'olona iray ary 57 no naratra. Ny antony nahatonga ny fianjerana dia tsy fahitana fahitana firy noho ny oram-baratra mahery.
Misy ny fanadihadiana natolotry ny Tunisian National Railways Company hamaritana ny toe-javatra manodidina ny fifandonana anio sy hahitanao ireo tompon'andraikitra amin'izany.